Iwu nkwekọrịta | Law & More B.V.
Onye ọchụnta ego ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla nwere onwe ya n'okpuru iwu nkwekọrịta ọ dịkarịa ala otu oge. Esemokwu ndị metụtara ịkọwa nkwekọrịta, ajụjụ ahụ ọ bụrụ na nkwa niile ekwere na nkwekọrịta emezuola nke ọma, nsonazụ ya na-ezighi ezi bụ usoro nke ụbọchị.
Ọ D YOU MAKA INWETA NA-AH DR CONBARA AJ CONTA?
Need chọrọ enyemaka iji depụta nkwekọrịta? Achọpụtaghị nkwekọrịta ndị ahụ emere ma ịchọrọ ịkwụsị nkwekọrịta ahụ? Ka ị nwere esemokwu nke bilitere na mmechi nke nkwekọrịta? Anyị ga-eji obi ụtọ na-eje ozi.
Ihe atụ nke isiokwu anyị ga - achọ inyere gị aka na:
• edepụta na ịtụle ọrụ dị iche iche;
• ịkwụsị ọrụ nkwekọrịta;
• edetu edetu banyere ihe dị na ndabara ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ nke nkwekọrịta;
• idozi esemokwu ndị bilitere na mmechi nke nkwekọrịta;
• na-ekwurita banyere ihe ndị dị na nkwekọrịta.